Xaqa in aad ka doonatid taagero adeega bulshada | Dina Rättigheter
Xaqa in aad ka doonatid taagero adeega bulshada
Haddii adeega bulshada uu kuu diido codsigaaga waa la huraan in ay ku qoraan warqad kuna siiyaan. Haddii aadan helin warqadaa waydiiso!
Waxa aad xaq u leedahay in aad codsatid caawimaad dhaqaale(lacagta iijaar guriga iyo cuntada). Wac adeega bulshada xaafada/degmada aad degantahay oo waydiiso in aad dhiibatid codsiga cawimaada dhaqaale. Haddii shaqaalaha(qofka wax ka qabanaya arinkaaga) uu maya ku yiraahdo, waydiiso in aad dhiibtid cidsigaaga si kastaba ha ahaate sababta oo ah waxaad degantahay degmadan, oo waad wayday si kale oo aad xaaladan u maarayso una sheeg in degmada mas´uuliyad ka saarantahay dadka degmada degan, xitaa kuwa aan sharciga lahayn.
Waxa aad xaq u leedahay in aad rafcaan ka qaadato go`aanka adeega bulshada islamarkaana adeega bulshada kaa cawiyaan rafcaan qaadashada.
Degmada waxaa ka saaran mas´uuliyad dhamaan dadka ku sugan ama degan degmada. Taas micnaheedu waxa ay tahay adeeg bulsha degmadu in uu mas´uul ka yahay dhamaan dadka ku sugnaa degmada afartii usbuuc ee ugu danbeeyay. Iyada oo aan loo fiirinayn in ay daganaansho joogta ah leeyihiin iyo in kale, adeega bulshadu waxaa sidoo kale ka saaran mas´uuliyad dadka ladiiday codsigoodi daganaansha ku was oo weli jooga dalka Iswiidhan. Waa arin muhiim ah in la ogaado oo sheegtid qofkaagan sharci la´aantada marka aad xiriir la yeelanaysid adeega bulshada.
Way fiicantahay in qof kale ku sii raaco marka aad adeega bulsha la kulmaysid. Waxa aad codsan kartaa caawimaada daryeelka caafimaadka, daawayn ama taagero gaar ah oo xanuun maskaxeed dartiis ah, si xun u isticmaalida ama naafo ah. Waxa aad xitaa cosdasn kartaa qof lagu la xidhiidhiyo (kaa caawinaya waxyoolo badan oo aadan keliga awoodin). Degaan ama xero maalmaha fasaxa la dego ama taagero kale oo caruurta ama dhalinyarada la siiyo. Waxa aad kaloo codsan kartaa taagero dhaqaale. Tobanka lambar ee dhalashada la´aan tood xaq uma siinayso adeega bulshada in ay maya! ku dhahaan ama aysan kaa gudoomin ama oggolaansha codsigaaga.
Waa muhiim in aad xasuusnaatid:
Marka adeega bulshada la xiriirayo qof codsaday sharciga degnaansha kadibna diidmo helay,waxaa lama huraan ah in adeeg bulshadu aysan la xiriirin booliska. Marka kuugu horaysa ee aad la xiriiraysid adeega bulsha ku dheh shaqaalaha adeega bulsha in aad hubtid in aysan la xiriirayn booliska ama waaxda socdaalka.
Laakiin hadii booliska ama waaxda socdaalka ay la soo xiriiraan adeega bulshada oo ay waydiiyaan qof ay magaciisa ay yaqaanaan waxa lama huraan ah in ay u sheegaan qofka macluumaadkiisa. Sidaa darteed waxaa fiican in aad cinwaan qof kale oo aadan degnayn u sheegtid adeega bulshada.
Haddii qof aan weligii codsan sharciga degnaansha la soo xiriiro adeega bulshada waxa ay u baahanayaan in ay la xiriiraan waaxda socdaalka.
Waan ka xunahay waa sidan qaanuunku, turjumida qaanuunka iyo waxqabadka way ku kala duwan yihiin xaafadaha iyo degmooyinka. Warbixinta alaabtan ama waraaqdan waxa ay ahaan karta mid si fiican uga shaqaysa qaybo ka mid ah xaafisyada adeega bulsha ama si xun qaybo kale.